အမျိုးမျိုးသောအဆို့ရှင်များ၏အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များ - China Like Valve (Tianjin)
၁။ ဂိတ်အဆို့ရှင် - gate valve gate valve က channel ဝင်ရိုး၏ဒေါင်လိုက် ဦး တည်ရာသို့ရွေ့လျားနေသော valve ကိုရည်ညွှန်းသည်။ ၎င်းကိုပိုက်လိုင်းပေါ်တွင်ဖြတ်တောက်ရန်အလို့ငှာအဓိကအသုံးပြုသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် gate valve အားစီးဆင်းမှုကိုထိန်းညှိရန်မသုံးပါ။ ၎င်းကိုအပူချိန်နိမ့်ဖိအား (သို့) မြင့်မားသောအပူချိန်နှင့်မြင့်မားသောဖိအားတို့အတွက်အသုံးပြုနိုင်ပြီးမတူညီသောအဆို့ရှင်များဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ သို့သော်အဆို့ရှင်နှင့်ရွှံ့များနှင့်အခြားမီဒီယာများသယ်ဆောင်သည့်ပိုက်လိုင်းများတွင်ယေဘုယျအားဖြင့်အသုံးမပြုခြင်း
opening ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ပိတ်ခြင်းအတွက်လိုအပ်သော torque သည်သေးငယ်သည်။
medium ၎င်းကိုအလယ်အလတ်စီးဆင်းနေသောလက်ဝဲပိုက်ကွန်ယက်ပိုက်လိုင်းတွင် သုံး၍ အလယ်အလတ်စီးဆင်းမှု ဦး တည်ချက်အကန့်အသတ်မရှိပါ။
fully အပြည့်အဝဖွင့်သောအခါ၊ အလုပ်လုပ်သောအလတ်စားအားဖြင့်မျက်နှာပြင်၏တိုက်စားခြင်းကို stop valve ထက်ငယ်သည်။
opening ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ပိတ်ခြင်း၏ဖြစ်စဉ်အတွက်, တံဆိပ်ခတ်မျက်နှာပြင်အတော်လေးပွတ်တိုက်သည်နှင့်ပွတ်တိုက်ကြီးမားသည်မြင့်မားသောအပူချိန်မှာပွန်းပဲ့ဖြစ်ရပ်ဆန်းဖြစ်ပေါ်စေရန်လွယ်ကူသည်ဖြစ်။ ,
③ယေဘုယျအားဖြင့်တံခါးအဆို့ရှင်များသည်တံဆိပ်ခတ်ထားသောမျက်နှာပြင်နှစ်ခုရှိသည်၊ ၎င်းသည်ပြုပြင်ခြင်း၊ ကြိတ်ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းတို့တွင်အခက်အခဲအချို့ရှိသည်။
၂။ Butterfly အဆို့ရှင် - လိပ်ပြာအဆို့ရှင်သည်အရည်လမ်းကြောင်းကိုဖွင့်၊ ပိတ်၊ ညှိခြင်းပြုလုပ်ရန် ၉၀ ဒီဂရီလောက်တွင်လှည့်ပတ်သွားသော disk အမျိုးအစားဖွင့်ခြင်းနှင့်ပိတ်ခြင်းအစိတ်အပိုင်းများကိုသုံးသောအဆို့ရှင်ဖြစ်သည်။
①၎င်းသည်ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊ သေးငယ်သောပမာဏ၊ ပေါ့ပါးမှုနှင့်စားသုံးမှုနည်းပါးပြီးကြီးမားသော caliber အဆို့ရှင်တွင်မသုံးပါ။
③၎င်းကိုအလတ်စားတွင်ဆိုင်းထိန်းထားသောအစိုင်အခဲအမှုန့်များနှင့်အသုံးပြုနိုင်ပြီးမျက်နှာပြင်၏ခိုင်ခံ့မှုအတိုင်းအတာကိုအမှုန့်နှင့်အမှုန့်မီဒီယာများတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းကိုလေဝင်လေထွက်နှင့်ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးပိုက်လိုင်းနှစ်လမ်းဖွင့်ခြင်းနှင့်ပိတ်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုသည်။ ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းနှင့်သတ္တုဗေဒ၊ ပေါ့ပါးသောစက်မှုလုပ်ငန်း၊ စွမ်းအင်နှင့်ရေနံဓာတုစနစ်များ၏ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုနိုင်သည်။
flow စီးဆင်းမှုစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်သည်ကြီးမားသည်မဟုတ်ပါ၊ အဖွင့်အပိတ် ၃၀ သို့ရောက်သောအခါစီးဆင်းမှုသည် ၉၅% ကျော်သွားလိမ့်မည်။
butter လိပ်ပြာအဆို့ရှင်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်တံဆိပ်ခတ်ပစ္စည်းအကန့်အသတ်ရှိခြင်းကြောင့်၎င်းသည်အပူချိန်မြင့်မားခြင်းနှင့်ဖိအားမြင့်ပိုက်လိုင်းစနစ်အတွက်မသင့်တော်ပါ။ အထွေထွေအလုပ်လုပ်သောအပူချိန်မှာ ၃၀၀ ℃အောက်တွင်ရှိပြီး PN40၊
၃။ ဘောလုံးအဆို့ရှင် - ၎င်းသည် plug အဆို့ရှင်မှပြောင်းလဲသည်။ ၎င်း၏အဖွင့်အပိတ်အစိတ်အပိုင်းများသည်ဘောလုံးကိုပင် ၀ င်ရိုးပတ်လည်တွင် ၉၀ ဒီဂရီလှည့ ်၍ ဖွင့ ်၍ ပိတ်နိုင်သည်။ ဘောလုံးအဆို့ရှင်ကိုအဓိကအားဖြင့်ပိုက်လိုင်းတွင်အလတ်စားစီးဆင်းမှု ဦး တည်ချက်ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲခြင်းတို့တွင်အသုံးပြုသည်။ V-shaped အဖွင့်အဖြစ်ဒီဇိုင်းအဆို့ရှင်ကိုလည်းကောင်းမွန်သောစီးဆင်းမှုစည်းမျဉ်း function ကိုရှိပါတယ်။
①စီးဆင်းမှုခုခံမှုသည်အနိမ့်ဆုံး (အမှန်တကယ် ၀) ဖြစ်သည်။
②၎င်းသည်ချောမွေ့သောအလယ်အလတ်နှင့်အနိမ့်သောပွက်ပွက်ဆူနေသောအရည်များတွင်သုံးနိုင်သည်။ ၎င်းသည် (ချောဆီမပါသော) လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုတွင်မတွန့်ပါနှင့်။
pressure ဖိအားနှင့်အပူချိန်အကွာအဝေးတွင်၊ တံဆိပ်ခတ်ခြင်းကိုလုံးဝသဘောပေါက်နိုင်သည်။
④၎င်းသည်အမြန်ဖွင့်ခြင်းနှင့်ပိတ်ခြင်းကိုနားလည်နိုင်ပြီးအချို့သောအဆောက်အ ဦ များ၏အဖွင့်နှင့်ပိတ်ချိန်သည် ၀.၀၅ မှ ၁.၁ သာဖြစ်ပြီးစမ်းသပ်မှုခုံ၏အလိုအလျောက်စနစ်တွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ အဆို့ရှင်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်လျင်မြန်စွာပိတ်သောအခါ, စစ်ဆင်ရေးသက်ရောက်မှုအခမဲ့ဖြစ်၏
fully အပြည့်အဝပွင့်လင်းပြီးအပြည့်အ ၀ ပိတ်သည့်အခါဘောလုံးနှင့်ထိုင်ခုံ၏တံဆိပ်ခတ်ထားသောမျက်နှာပြင်သည်အလတ်စားမှသီးခြားဖြစ်နေသောကြောင့်အရှိန်မြင့်အဆို့ရှင်ဖြင့်ဖြတ်သန်းစီးဆင်းနေသောအလတ်စားသည်တံဆိပ်ခတ်မျက်နှာပြင်၏တိုက်စားမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
closing ပိတ်သည့်အခါအစိတ်အပိုင်းများသည်မြင့်မားသောဖိအားခြားနားချက်ကိုခံနိုင်သည်။ (11) အပြည့်အဝ welded အဆို့ရှင်ကိုယ်ထည်နှင့်အတူဘောလုံးအဆို့ရှင်တိုက်ရိုက်မြေအောက်သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံသောကြောင့်အဆို့ရှင်အတွင်းမှချေးခြင်းမှကင်းလွတ်စေခြင်းနှင့်အများဆုံးသက်တမ်းသည်နှစ်ပေါင်း ၃၀ အထိရောက်ရှိနိုင်ပြီး၎င်းသည်ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းများအတွက်စံပြအဆို့ဖြစ်သည်။
valve အဆို့ရှင်ထိုင်ခုံ၏အဓိကတံဆိပ်ခတ်လက်စွပ်ပစ္စည်းသည် polytetrafluoroethylene ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်ဓာတုပစ္စည်းအားလုံးနီးပါးကိုမစွမ်းဆောင်နိုင်သောကြောင့်အသေးစားပွတ်တိုက်မှုကိန်း၊ တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည်၊ အိုမင်းရန်မလွယ်ကူခြင်း၊ ကျယ်ပြန့်သောအပူချိန်နှင့်ထိရောက်စွာတံဆိပ်ခတ်ခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည်။ Polytetrafluoroethylene ၏မြင့်မားသောချဲ့ထွင်နိုင်မှု၊ အအေးစီးဆင်းမှုကိုထိခိုက်လွယ်ခြင်းနှင့်အပူစီးကူးမှုနိမ့်ခြင်းစသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများသည်ထိုင်ခုံတံဆိပ်ခတ်ခြင်း၏ဒီဇိုင်းကိုဤလက္ခဏာများနှင့်ပတ်သတ်ရန်လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ တံဆိပ်ခတ်သည့်ပစ္စည်းခက်ခဲလာသောအခါတံဆိပ်၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှုပျက်စီးသွားသည်။ ထို့အပြင် polytetrafluoroethylene ၏အပူချိန်ခံနိုင်ရည်နိမ့်သည်နှင့် 180 than ထက်နည်း၏အခြေအနေအောက်တွင်သာအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဒီအပူချိန်အထက်, တံဆိပ်ခတ်ပစ္စည်းအိုလိမ့်မည်။ သို့သော်ရေရှည်အသုံးပြုရန်စဉ်းစားလျှင်၎င်းကို ၁၂၀ at တွင်သာအသုံးပြုပါလိမ့်မည်။
②ယင်း၏ထိန်းညှိစွမ်းဆောင်ရည်သည် stop valve ထက်အထူးသဖြင့် pneumatic valve (သို့မဟုတ် electric valve) ထက်ပိုဆိုးတယ်။
4. Stop valve - ပိတ်တဲ့သူ (disc) သည်ထိုင်ခုံ၏အလယ်လိုင်းတစ်လျှောက်ရွေ့လျားနေသောအဆို့ရှင်ကိုရည်ညွှန်းသည်။ disc ၏လှုပ်ရှားမှုအရ၊ အဆို့ရှင်အဖွင့်အပြောင်းပြောင်းလဲမှုသည် disc stroke နှင့်အချိုးကျသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အဆို့ရှင်ပင်၏အဖွင့်အပိတ်သည်အတော်အတန်တိုပြီး၊ ၎င်းသည်အလွန်စိတ်ချရသောအဆက်ဖြတ်သောလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အဆို့ရှင်အဖွင့်အပြောင်းသည်အဆို့ရှင်၏သက်တမ်းနှင့်တိုက်ရိုက်အချိုးကျသောကြောင့်၎င်းသည်အလွန်သင့်လျော်သည်။ စီးဆင်းမှုကိုထိန်းညှိ။ ထို့ကြောင့်ဤအဆို့ရှင်သည်ဖြတ်တောက်ခြင်းသို့မဟုတ်ထိန်းညှိခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းတို့တွင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်အလွန်ရွေ့လျားနေသည်။
opening ဖွင့်ခြင်းနှင့်ပိတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင်၊ အဆို့ရှင်ကိုယ်ထည်၏ disc မျက်နှာပြင်နှင့်တံဆိပ်ခတ်မျက်နှာပြင်များအကြားပွတ်တိုက်မှုသည်တံခါးဝအဆို့ထက်သေးငယ်သဖြင့်၎င်းသည် wear -proof ဖြစ်သည်။
②အဖွင့်အမြင့်သည်အဆို့ရှင်၏ချန်နယ် ၁/၄ သာဖြစ်ပြီး၊ ဒါကြောင့်တံခါးအဆို့ရှင်ထက်များစွာသေးငယ်သည်။
③ယေဘုယျအားဖြင့်အဆို့ရှင်ကိုယ်ထည်နှင့် disc ပေါ်တွင်တံဆိပ်ခတ်မျက်နှာပြင်တစ်ခုသာရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်သည်ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီးထိန်းသိမ်းရန်လွယ်ကူသည်။
the Filler သည် Asbestos နှင့် graphite တို့ပေါင်းစပ်ထားသောကြောင့်အပူချိန်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် stop valves များအတွက် stop valves များကိုအသုံးပြုသည်။
the အဆို့ရှင်မှတဆင့်အလယ်အလတ်စီးဆင်းမှုလမ်းကြောင်းပြောင်းလဲခြင်းကြောင့်၊ အဆို့ရှင်၏အနည်းဆုံးစီးဆင်းမှုခုခံမှုသည်အခြားအဆို့ရှင်များထက်မြင့်မားခြင်း၊
၅။ Plug Valve - လည်ပတ်နေသောအဆို့ရှင်ကို plunger shaped closure parts နှင့်ရည်ညွှန်းသည်။ 90 °လှည့်ခြင်းအားဖြင့်၊ အဆို့ရှင်ပလပ်၏ channel port သည်အဆို့ရှင်ကိုယ်ထည်ရှိ channel port နှင့်ချိတ်ဆက်နေတယ်သို့မဟုတ်အဖွင့်အပိတ်ကိုနားလည်ရန်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ plug ကိုတစ် ဦး ဆလင်ဒါသို့မဟုတ် conical ပုံသဏ္inာန်ရှိနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါနိယာမဘောလုံးအဆို့ရှင်၏ဆင်တူသည်။ ဘောလုံးအဆို့ရှင်ကိုအဓိကအားဖြင့်ရေနံတွင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုသည်။
၆။ အ ဆို့ရှင် - ဖိအားခံရေယာဉ်၊ စက်ကိရိယာ၊ ပစ္စည်း၊ ရေသို့မဟုတ်ပိုက်လိုင်းအတွင်းရှိဖိအားသည်ခွင့်ပြုထားသောတန်ဖိုးထက်ပိုမိုမြင့်တက်လာပါကအဆို့ရှင်သည်အလိုအလျောက်ပွင့်လာပြီးစက်ပစ္စည်းများ၊ ရေယာဉ်သို့မဟုတ်ပိုက်လိုင်းနှင့်ဖိအားများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်မြင့်တက်လာခြင်းမှကာကွယ်ရန်အဆို့ရှင်သည်အလိုအလျောက်ပွင့်လာမည်။ ဖိအားသည်သတ်မှတ်ထားသောတန်ဖိုးသို့ကျသွားသောအခါစက်ပစ္စည်းများ၊ ရေယာဉ်များသို့မဟုတ်ပိုက်လိုင်းများ၏လုံခြုံသောလည်ပတ်မှုကိုကာကွယ်ရန်အဆို့ရှင်သည်အလိုအလျောက်နှင့်အချိန်မီပိတ်လိမ့်မည်။
၇။ ရေနွေးငွေ့ထောင်ချောက် : အလယ်အလတ်ရေနွေးငွေ့နှင့်လေထုဖိအားများတွင် condensate အချို့ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ကိရိယာ၏ထိရောက်မှုနှင့်လုံခြုံသောလည်ပတ်မှုသေချာစေရန်အလို့ငှာအဆိုပါအသုံးမကျ။ အန္တရာယ်ရှိသောမီဒီယာကိုထုတ်ကုန်အသုံးပြုမှုနှင့်အသုံးပြုမှုကိုသေချာစေရန်အချိန်မီထုတ်ပစ်သင့်သည်။ ၎င်းတွင်အောက်ပါလုပ်ငန်းဆောင်တာများရှိသည် - produced ထုတ်လုပ်သည့်ငွေ့ရည်ဖွဲ့ကိုလျင်မြန်စွာဖယ်ရှားနိုင်သည်။ steam ရေငွေ့ယိုစိမ့်ခြင်းကိုတားဆီးပါ။ ③မီးခိုးငွေ့လေနှင့်အခြားအညစ်အကြေးမရှိသောဓာတ်ငွေ့။
8. အဆို့ရှင်ကိုလျှော့ချဖိအား : ကချိန်ညှိခြင်းဖြင့်အချို့လိုအပ်သောထွက်ပေါက်ဖိအားဖို့ဝင်ပေါက်ဖိအားကိုလျော့နည်းစေမယ့်အဆို့ရှင်သည် ဖြစ်. , အလိုအလျောက်ထွက်ပေါက်ဖိအားတည်ငြိမ်စောင့်ရှောက်ရန်အလတ်စားသူ့ဟာသူများ၏စွမ်းအင်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။
၉။ Check Valve - တန်ပြန်စီး ၀ င်သောအဆို့ရှင်၊ Check valve, back pressure valve နှင့် one-way valve ဟုလည်းလူသိများသည်။ ထိုအဆို့ရှင်များသည်ပိုက်လိုင်းအလတ်စားစီးဆင်းမှုမှထွက်ပေါ်လာသောအင်အားကြောင့်အလိုအလျောက်ဖွင့်လှစ်ပိတ်သွားပြီးအလိုအလျောက်အဆို့ရှင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Check Valve သည်ပိုက်လိုင်းစနစ်တွင်အသုံးပြုသည်။ ၎င်း၏အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်မှာအလယ်အလတ်နောက်ပြန်စီးဆင်းမှုကိုတားဆီးရန်၊ စုပ်စက်နှင့်မောင်းနှင်မှုကိုမော်တာအားနောက်ပြန်မစီးစေရန်နှင့်ကွန်တိန်နာလောင်စာများထုတ်လွှတ်ရန်ဖြစ်သည်။ Check Valve ကိုအရန် system ကို system pressure ထက်အထက်ဖိအားပေးနိုင်ရန်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းကို Swing အမျိုးအစား (ဆွဲငင်အား၏ဗဟိုအရလှည့်ပြောင်း။ ) နှင့်ရုတ်သိမ်းခြင်း (ဝင်ရိုးတလျှောက်ရွေ့လျားခြင်း) အဖြစ်ခွဲခြားနိုင်သည်။
post အချိန်: မတ်လ -31-2021